भियतनाम शिखर वार्ताः किमजोङलाई झुकाउन ट्रम्प असफल «
प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०७५, आईतवार २३:०९
उत्तर कोरियाका नेता किमजोङ उन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीचको हनोई वार्ता विना निष्कर्षमा सकिएको छ । निकै चासोको साथ हेरिएको उक्त वार्ता कुनै उपलब्धीमूलक भएन ।
आणविक निःशस्त्रीकरण र कोरिया युद्धको अन्त्यको घोषणा हुन सक्ने भनिएको वार्ता विषयमा अड्कियो । दुबै नेता खाली हात स्वदेश फर्केका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले वार्ताभन्दा बढी समय चीन, रुस र भारत–पाकिस्तान युद्धबारे बोलेका थिए ।
वार्ता सुरु हुनुअघि दुबै नेताले नयाँ सहमतिको लागि आफूहरुले प्रयास गर्ने बताएका थिए । तर, वार्तामा के भएको थियो र कसका कारण असफल भयो ? भन्ने प्रश्न विश्व समुदायले गरेको छ ।
खासगरी ट्रम्पका कारण हनोई वार्ता असफल भएको हो । वार्तामा ट्रम्पले उत्तर कोरियालाई कमजोर बनाउने नियतका साथ सर्त राखेका थिए ।
ट्रम्पले राखेका पाँच सर्त
१. आणविक निःशस्त्रीकरण गर्न उत्तर कोरिया तयार हुनेपर्ने । यही वार्तामा सम्झौता गरी संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने ।
२. कोरिया युद्धको अन्त्यको घोषणा गर्नुपर्ने । वार्तापछि जारी गरिने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुपर्ने ।
३. उत्तर कोरियामा अमेरिकाका सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न पाउनु पर्ने ।
४. उत्तर कोरियामाथि लगाइएको नाकाबन्दी अमेरिकाले उत्काल नहटाउने ।
५. अर्को शिखर वार्ता अस्वीकार ।
वार्तामा ट्रम्पले उत्तर कोरियाले आफ्ना सबै आणविक कार्यक्रम त्याग्नुपर्ने र फेरि कहिलै पुनः सुरु नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु पर्ने बताएका थिए । त्यसैगरी युद्धविरामको अवस्थामा रहेको कोरिया युद्धको अन्त्य भएको घोषणामा किमजोङले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने सर्त राखेपछि वार्ता असफल भएको हो ।
यी सबै विषयमा छलफलको आवश्यकता भएको भन्दै फेरि अर्को शिखर वार्ताको लागि किमजोङले राखेको प्रस्ताव ट्रम्पले अस्वीकार गरेपछि झन तनावपूर्ण बन्यो वार्ता । ट्रम्पले राखेका सबै कुरा किमजोङले मान्नुपर्ने तर अमेरिकाले लगाएको नाकाबन्दी तत्काल जारी रहने र उसले सम्झौताअनुसार काम गरेमात्रै सोच्न सकिने बताएका थिए । उत्तर कोरियालाई कमजोर बनाउने गरी राखिएको सर्त किमजोङले स्वीकार गरेनन् ।
त्यसैगरी अमेरिकाले उत्तर कोरियामा सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउनु पर्ने सर्त ट्रम्पको थियो । यसले उत्तर कोरियाको सूचनाको साथै गोप्य रुपमा विभिन्न गतिविधि गर्ने प्रयोजनको लागि कार्यालय स्थापनाको माग हुन सक्छ ।
ट्रम्पका यी माग र अडानलाई किमजोङले स्वीकार गरेनन् । ट्रम्पले बाहिर किमजोङको प्रशंसा गरेरै झुकाउन खोजेका थिए । भियतनाम वार्ता हुनअघि किमजोङलाई महान् र उत्तर कोरिया समृद्ध राष्ट्र बन्ने बताएका थिए । त्यसो त पहिलो शिखर वार्तापछि पनि ट्रम्पले उमेर बच्चा भएपनि परिपक्क र साहशी नेता भएको बताएका थिए ।
वार्तापछि पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ट्रम्पले उत्तर कोरियामाथि लागेका प्रतिबन्धहरु फुकुवा गर्न नेता किमजोङले राखेको प्रस्तावलाई आफूले अस्वीकार गरेको बताएका थिए । त्यस्तै तेस्रो शिखर वार्ताको लागि प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरेको जानकारी गराउँदै संवाददाताहरुसँग भने, “तेस्रो शिखर वार्ता अहिले सम्भव छैन, पछि के हुन्छ भन्न सकिन्न ।”
ट्रम्पले भियतनाम वार्तामा किमजोङलाई कमजोर बनाउने धेरै प्रयास गरेका थिए । वार्तामा किम कडा बन्दै गएपछि ट्रम्पले घुम्नुपर्छ भन्दै केही समय सँगै हिटडुल गराएका थिए । बाहिर किमको प्रसंशा गर्ने तर उत्तर कोरियालाई कमजोर बनाउने वा झुकाउने धम्कीपूर्ण सर्त ट्रम्पले राखेकै कारण भियतनाम वार्ता असफल भएको हो ।
अन्तरिक्षमा जान लागेका अर्बपति बेजोसलाई पृथ्वीमा फर्किन नदिन ५६ हजार बढीको हस्ताक्षर
आउँदो महिना विश्वका सर्वाधिक धनी व्यक्ति, अमेजनका संस्थापक एवं स्पेस कम्पनी ब्ल्यु ओरिजिनका मालिक जेफ
राष्ट्रपति जो बाइडनको चुनावसम्बन्धी महत्वपुर्ण विधेयक सिनेटमा रिपब्लिकनहरूद्वारा विफल
मुन्धुमस्टार डटकम​- अमेरिकी रिपब्लिकनहरूले राष्ट्रपति जो बाइडनको प्राथमिकतामा परेको चुनावसम्बन्धी नयाँ नियमको लागु गर्ने प्रयासलाई
अफगानिस्तानमा जारी पछिल्ला हिं’सात्मक घ’टनाप्रति चीनका वरिष्ट कुटनीतिज्ञले मंगलबार चासो व्यक्त गरेका छन्। उनले अफगानिस्तानमा